Ciidanka Kenya Oo Burburiyay Xarunta Shirkadda Hormuud Ee Magaalada Ceelwaaq.
Saturday January 20, 2018 - 07:08:42 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ee dhaca Koonfur galbeed dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada gumeysiga Kenya ay gubeen xarun shirkad isgaarsiineed oo shacabka Soomaaliyeed ay lahaayeen.
Kumanaan katirsan ciidanka Melleteriga Kenya oo kasoo gudbay xuduud beenaadka gobolka Gedo uu la wadaago dhulka Soomaalida NFD ayaa saaka aroortii hore xoog ku galay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay xalay saqdii dhexe duqeyn ba'an ku qaadeen xaafadaha magaalada halkaas oo ay ku burburiyeen guryo dad shacab ah leeyihiin, sidoo kale ciidanka Kenya waxay gubeen dhismaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee deegaan hoos yimaad degmada Ceelwaaq.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidanka Kenya ay dhulka lasimeen xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana burburay Taawarka iyo qeybta Matoorrada balse lamasoo sheegin wax khasaara nafeed ah oo shaqaalaha shirkadda kasoo gaaray dhacdadaasi.
Xarunta Hormuud ee deegaanka Ceelbanda oo ku dhow magaalada Ceelwaaq ayaa ah mid gabi ahaanba aan shaqeynayn balse dadka ku nool gudaha magaalada ayaa si caadi ah u siticmaalaya isgaarsiinta soomaaliya gaar ahaan Hormuud.
Ciidamada Kenya ee weerarka ka geystay Ceelwaaq ayaa kasoo gudbay Ceelqaaloow waxayna wadaan qorshayaal ay magaalada uga hirgelinayaan isgaarsiinta Safaricom ee Kenya laga leeyahay.
Tallaabadan lagu burburiyay shirkadda Soomaalidu leedahay ee Hormuud ayaa banaanka soo dhigaysa damaca gurrucan ee dhanka dhaqaalaha ah waxaana muuqata in ay doonayso kobcinta dhaqaalaha wadankeeda iyo burburinta dhaqaalaha shacabka Soomaaliyeed.